အစိုးရ ခေါင်းဆောင်နေရာ စစ်ခေါင်းဆောင်တို့ အတွက်သာစစ်တပ် အာဏာသိမ်းတာ ၂၆ နှစ်ပြည့်ပြီစကော့တလန် လွတ်လပ်ရေး၏ အဖိုးအခဆန္ဒမရှိသေးလုို့ စုိုးရိမ်စရာ မရှိတာပါသူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ် (၂)
ရွှေသခင်မလေး July 10, 2012 - 5:09 pm ကိုမွန်းအောင်…သီချင်းတွေကိုလွမ်းတယ်…
Reply jony powmpowm July 10, 2012 - 11:32 pm ကိုမွန်းအောင်ကြီး….
Reply Win Aung July 12, 2012 - 6:17 am Dennis, Nyi Nyi passed away.
Reply KO Aye July 13, 2012 - 5:15 pm ကို Dennis …ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးထဲက ခင်မင်ခဲ့တဲ့ တယောက်၊ ရှားရှားပါးပါး ရိုးသားတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသား အဆိုတော်တယောက်၊ လူကောင်းလူတော် တယောက်။ သူ့အကြောင်းမကြားရတာ ကြာပြီမို့ စာရေးသူကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သူ့ဖုံးနံပါတ် ကလေးကိုတော့ ရချင်ပါတယ်.
Reply kovirus July 15, 2012 - 12:56 am Where to download Ko Moon Aung’s song?
Reply အိမ်လွမ်းသူ July 16, 2012 - 11:48 am ကိုမွန်းအောင်ရေ..ဟောင်းနွမ်းတဲ့ အဆောက်အဦးတွေနဲ့ဖေါက်ပြန်တဲ့လူတန်းစားတွေတော့၊ ပြိုပျက်ကုန်ပြီလို့မပြောချင်ပေမယ့်၊ ကြွေးဟောင်းလေးတွေ ပြန်ဆပ်နိုင်မလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ၊ ထာဝရသစ္စာရှင် မြစ်မင်းတစ်စင်းကိုတော့ ပြန်ပြီးကြည့်စေချင်တယ်။ လွမ်းရတဲ့ညတွေ လွန်ပါစေ စီးရီးကို၊ ကိုယ့်ကားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်တိုင်း အားအင်တွေ သိပ်ဖြစ်ရပါတယ်။ (ရှေ့ သို့ အားမာန်) ဆိုတဲ့ တေးသီချင်းစာသားကို မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေ အပါအ၀င်၊ ကိုမွန်းအောင်ရဲ့ ဂီတကို နှစ်သက်သူများအတွက်၊ ကျနော် ဒီပို့ စ်မှာ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးထားတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ ကိုမွန်းအောင်ရဲ့ ပီသ ရှတတဲ့ အသံနဲ့ ဆိုလိုက်တော့၊ အတိုင်းထက်အလွန် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ထူးအိမ်သင်ပြန်ဆိုထားတဲ့(ကြွေးဟောင်းဆပ်ခွင့်ပြုပါ အမေ) သီချင်းက၊ ဒီစီးရီးထဲကပါ။ ထူးအိမ်သင်ကိုကြိုက်ပေမယ့် ကိုမွန်းအောင်ဆိုထားတာကို ပိုကြိုက်တယ်လို့ကျနော်အရင်က ပြောဖူးပါတယ်။ လော်ကယ်ရထားကို အမြန်ရထားလို့ပြောင်းဆိုလိုက်ရကတည်းက၊ သီချင်းရဲ့ မူရင်းရသ ပျောက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ကိုမွန်းအောင်စိတ်ပူပန်နေတာလည်း ဒါတွေကြောင့်
Reply Maung Myo July 16, 2012 - 4:29 pm //၈/၈၂ခွေထွက်တော့ကျွန်တော်က၆တန်းပါအဲ့ခွေကတည်းကစကြိုက်ခဲ့တာထွက်ခဲ့သမျအားလုံးကိုလဲကြိုက်ပါတယ်။၈လေးနောက်ပိုင်းမှာကိုမွန်းအောင်တောထဲဝင်သွားတော့နမျောမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ကိုယ်စီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုမွန်းအောင်ကိုလေးစားမိပါတယ်။ပြည်ပကနေဆိုခဲ့တဲ့သီချင်းအားလုံးကိုတော့ရချင်ကြားချင်ပါတယ်။တစ်မိသားစုလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။